Peppermint: ọgwụ Njirimara na contraindications - Peppermint - 2020
Obere ihe: nsogbu na uru dị n'ahụ
Ihe ndị bara uru nke osisi dị iche iche gosipụtara site n'aka ndị nna nna anyị ọtụtụ narị afọ gara aga, mgbe a na-eji ha agwọ ọrịa maka ọrịa dị iche iche. Ọ dịghị ihe dị iche na nke a bụ peppermint, nke nwere mmetụta nkwụsị na mgbochi mkpali. N'oge a, a na-eji osisi a eme ihe maka ihe ọkụkụ na ohere dị iche iche (eji nri, ọgwụ, perfumery na ọbụna ụlọ mmanya na-aba n'anya). Mint epupụta bụ ọgwụgwọ pụrụ iche maka ọrịa dị iche iche.
Ihe mejupụtara chemical nke osisi ọgwụ
Ojiji nke peppermint na nkà mmụta ọgwụ
Esi eji osemint na nkà mmụta ọgwụ
Kedu ihe bara uru infusion nke peppermint
Njirimara bara uru nke obere mmanya
Uru decoction nke peppermint
Kedu esi eji oilmint mmanụ
Uru nke ịṅụ tii peppermint
Medicinal properties of mint baths
Ònye bụ ihe nke peppermint na contraindicated
Peppermint ka a na-akpọ perennial, herbaceous, osisi fragrant, nke ruru 60-80 cm n'ịdị elu. O nwere ihe na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara n'oge ụfọdụ, ya na obere ntutu isi. A na-ekpuchi ya na ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke akwụkwọ oblong-ovate na obere petioles na akụkụ aka ya. Mgbe ụfọdụ, epupụta nwere ike inwe odo odo.
Okooko osisi greenmint dị obere, nke a na-agbakọta n'ikike na-acha odo odo ma nwee agba odo odo (dịka epupụta, nwere ihe ngwọta). Nkọwa nke ụdị mkpụrụ obi ise ahụ, nke a na-emekarị ka ọ bụrụ nke a na-adịghị agbanwe agbanwe (indistinctly double-lipped), pinkish or purple-violet. Okooko osisi na July na August.
Ị ma? Ọ dịghị aha ndị a na-edeghị aha maka peppermint bụ oyi ma ọ bụ mint Bekee, yana ose na chilliata.
Epekere nke nwere ihe nro, nke na-esi na ya, na mkpụrụ ya (dị ka obere obere) nwere mkpụrụ anọ.
Njirimara na-agwọ ọrịa nke peppermint, nke, site n'ụzọ, nwere ụfọdụ contraindications, na-adabere na ya mejupụtara mejupụtara. Ya mere Isi ihe ndị na-arụ ọrụ na mmanụmint bụ mmanụ dị oké mkpa, tannins, flavonoids na obi ilu, ma ihe kachasị mkpa n'etiti ha bụ menthol (nwere 60%). Ọ bụ onye, ​​mgbe a na-etinye ya n'akpụkpọ ahụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ mucous, na-eme ka akwara na-egbu ya ma na-eme ka obi na-agwụ agwụ na oyi.
Site na ntụgharị nke ndị na-anabata "oyi", ihe ndị dị elu dị warara, na arịa nke akụkụ ahụ, kama nke ahụ, gbasaa. O yikarịrị ka nke a na-akọwa nhụjuanya nke ihe mgbu na otu angina (a na-ewere menthol na otu shuga maka ihe mgbu na mpaghara obi). Tụkwasị na nke a, a pụrụ iji ihe a mee ihe dị ka anesthetic ọrịa mpaghara.
Ị ma? N'ihe dị ka narị afọ nke iri abụọ, a na-eji mint mee ihe dị ka isi ihe ọkụkụ na-emepụta ọkụ ezé, na ihe dị ka afo 50 gara aga, eze na-agbadata, na-adabere na mint mpempe, bụ ihe a na-ahụkarị (a na-eme ha iji wepụ aka mgbu). Taa, a na-eji mint dị ka otu n'ime ihe ndị bụ isi nke toothpastes.
Ihe nile nke peppermint nwere ọgwụ ọgwụ. Osisi, Ome na okooko osisi nwere nnukwu ego nke ọ bụghị nanị mmanụ dị mkpa na tannins, dịka mmiri, shuga, abụba, vitamin C na P, carotene, saline ịnweta, steroid na antioxidants. Osisi mkpuru osisi gunyere ihe dika pasent 20 nke mmanu abuo eji eme nri na ndi ozo.
Mmetụta dị mma nke mint nwere n'ahụ mmadụ emeela ka o nwee ike ịmepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro ọgwụ na-adabere na ya. Karịsịa, a na-eji ụdị ose ahụ ọ bụghị nanị na ndị mmadụ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọdịnala, kamakwa na aromatherapy, na imepụta ihe ịchọ mma ma ọ bụ na ụlọ ọrụ nri.
Na ọgwụ ọgwụ, ọgwụ maka ọgwụgwọ isi ọwụwa, ọrịa obi obi, nsogbu nhụjuanya, ụra nke ọma, nsị nke usoro nsị, ụkwara ume, ọnya afọ na oyi na-egbu na-adabere na osisi a. Ọzọkwa, ndị dị otú ahụ dị irè maka vomiting, ọrịa akwara, akụrụ ma ọ bụ imeju, na atherosclerosis.
A na-eji ome na epupụta nke osisi ahụ mee ihe ma ọ bụ nke ọhụrụ, na nke ọ bụla, nke nwere ezigbo ụtọ na ose na-esi ísì ụtọ (nke dị elu nke menthol).
N'ịmụta banyere mint na-eme n'ahụ mmadụ, nne nne anyị emepụtawo ọtụtụ ntụziaka maka iji ya mee ihe n'ụzọ dị irè. Enwetara ihe omuma ihe site na nbo ruo ogbo, ekele nke ihe ndi ozo, decoctions, lotions ma o bu ihe ndi ozo bu ndi ka eji eme ihe n'oru ogwu.
Ihe na-eme ka o sie ike bụ ihe kachasị mfe iji mee ya. Naanị ị ga-awụpụ otu teaspoon nke epupụta nke osisi 200 ml nke esi mmiri, mgbe ahụ na-esi ọnwụ 20 nkeji. Tupu iji (ma ị nwere ike ozugbo) nyocha mmiri mmiri na, ma ọ bụrụ na achọrọ, tinye sugar. Were nke a infusion otu tablespoon ọ bụla 2-3 awa.
Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike iwepụ ehighị ụra nke ọma, nchegbu, isi ọwụwa na mgbu n'ime afọ, n'ihi na osemint soothes ma kwụchaa spasms, ma na-enyekwa aka na nrekasi obi.
N'ezie, peppermint tincture nwere ọtụtụ ọgwụ ọgwụ, Otú ọ dị, echefukwala banyere ekwe omume contraindications bụ àgwà nke ụdị ọ bụla nke osisi (ọzọ na na mgbe e mesịrị).
A pụkwara iji ọgwụ na-egbu nri na-edozi ya, nke ga-eme ka ụlọ ọgwụgwọ ya dịkwuo elu. Ya mere, a na-eji nchịkwa nke mmụọ na mkpịsị osemịm mee ihe n'ụzọ gara nke ọma maka inhalation maka mbufụt nke imi, trachea, akpịrị mucosa, ma ọ bụ maka bronchitis. Mgbe a na-etinye ya n'èzí, ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ maka nsị, maka isi ọwụwa, mpụga ma ọ bụ mbufụt nke akpụkpọ ahụ.
Ọ dị mkpa! Maka akpụkpọ ahụ, ọ ka dị irè iji ihe nkedo ma ọ bụ nsị nke mint n'ime, ikekwe ọbụna na enema..
A na-eji tincture mmanya na-emepụta ihe dị ka ndị a: 20 g nke okpukpu kporo wunye 100 ml nke mmanya mmanya 75, wee sie ike n'ebe gbara ọchịchịrị ruo izu abụọ. Na infusion na-iwesa na 10-15 tụlee (nwere ike diluted na mmiri) 3-4 ugboro n'ụbọchị.
E nwere ọtụtụ nhọrọ maka ịkwadebe decoction nke peppermint. Dịka ọmụmaatụ, nyere na osisi a dị mma iji mee ka ọdịmma ahụ dịkwuo mma ma nwee ike ime ka obi dịkwuo mma, ndenye ọgwụ na-esonụ ga-enye aka maka ịda mbà n'obi: 1 tbsp. a ga-awụnye spoonful nke epupụta epupụta na otu iko esi mmiri na obụpde maka nkeji 10. Mgbe nchọta ụdị decoction ahụ, ị ​​ga-ewere ọkara otu iko ugboro abụọ n'ụbọchị - n'ụtụtụ na ná mgbede.
E nwere ụzọ ọzọ iji mee ka decoction. Were otu tablespoon nke mint minced ma gbakwunye ọkara otu liter mmiri na ya. Mgbe ahụ tinye ihe mejupụtara na saucepan ma kpoo obere okpomọkụ maka ihe dịka minit 10. Mgbe nke ahụ gasị, kwe ka efere ahụ nye ihe dị ka minit 10-15 ma gbanye ya.
A na-eji ụzọ a nabatara n'ime ọkara otu iko ugboro atọ n'ụbọchị tupu nri. Ịnwere ike itinye sugar ma ọ bụ mmanụ aṅụ na decoction, nke ga-eme ka ọ dịkwuo uto.
Ọbụna mint mmanụ a kwadebere na mint - ihe ngwọta dị irè maka abdominal mgbu, nrịkasi obi ma ọ bụ bloating. Ụzọ kachasị mfe bụ iji ya na mmiri ma ọ bụ ịgbapu na mpempe shuga (3-4 tụlee ga-ezu). Na mgbakwunye, a na-ejikarị ya n'èzí - na ịgwọ ọrịa, ọrịa anụ ahụ na-egbuke egbuke ma mee ka isi ọwụwa daa (nwere ike tinye ya na mpaghara oge n'oge migraine).
N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe ị na-eji peppermint dịka tii, a na-akwụ ụgwọ nlebara anya naanị ya akwụkwọ, ọ bụ ezie na ha nwekwara ụfọdụ ịjụ ọgwụ. Ekwesịrị m ịsị na tii mint bụ ihe na-esi ísì ụtọ na ihe ọṅụṅụ dị nro, na-enye obi ụtọ dị n'ime. Ọ na-enye ume ọhụrụ, na-enye ahụ ike ma na-emezi usoro nsị. N'otu oge ahụ, tii a nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ ahụ ike uche, na-egbochi nchegbu ụjọ na inyere aka ike, ma na-echefu nsogbu.
Mite tii na-eme ka o guzosie ike dịka ọgwụgwọ na-agwọ oyi na-atụ, ya mere ọ ghọwo otu n'ime mmanya kachasị ewu ewu na ezinụlọ ndị a. Ntụziaka maka ime mint tii dị mfe: otu tablespoon (na ugwu) nke a mịrị amị epupụta inflorescences nke Mint na-wụsara na otu iko esi mmiri na nye maka 10-15 nkeji, mgbe nke tii zuru njikere maka ojiji. Dabere na mmasị onwe onye, ​​ị nwere ike itinye sugar ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ihe ọṅụṅụ ahụ.
A na-enweta uru nke tii mint na nso nso ozugbo: ọ na-enyere aka ịwelite ụda ma mee ka ahụike zuru ezu. Ka o sina dị, anyị ekwesịghị ichefu na mint bụ osisi ọgwụ, nke pụtara na a gaghị emegbu ya.
Maka nwatakịrị na-arịa ọrịa, a na-eji obere tii na-esi ísì mee ihe n'ụzọ dị iche, na-ebelata nsị nke mint infusion site na itinyekwu mmiri. Nke ahụ bụ, maka nwa mint ọṅụṅụ, ị ga-achọ ka ihe na-esi nri nke ahihia kpọrọ nkụ na ọkara lita nke mmiri mmiri, ma ọ bụ naanị ntakịrị ihe ha. Mgbe ị na-erigbu, ị nwere ike inye nwa ahụ tii, mana, dị ka omume na-egosi, ọ ka mma ịtinye mmanụ aṅụ ma ọ bụ sugar ya (nke a ga-eme ka tastier dịkwuo mma).
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ihe ọṅụṅụ ahụ gbasiri ike, ha nwere ike ịsacha imi gị na oyi ma ọ bụ kpochapụ ọnụ gị iji kpochapụ ísì ọjọọ.
Tee Mint bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya iji belata acidity nke afọ, iji lụso ọrịa colitis, ihe mgbu n'oge menstruation ma ọ bụ menopause. Na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, nanị ịkwesịrị ịjupụta akwụkwọ akwụkwọ peppermint (4-5 leaflets) na otu iko mmiri esi mmiri, mgbe ọ dọbisịrị ma ọ bụ belata mint ahụ n'ime obere iberibe. Tea na-esi ọnwụ nkeji 5-7, mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike ịnweta ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ ma dị mma.
Ọ bụrụ na achọrọ, ịnwere ike ịgbakwunye osisi ndị ọzọ ka mint tii. Naanị ihe ha ga - eme bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ ahụ, ga - abụ ezigbo nkwụsị nke oyi na - enye aka iji dozie nsogbu.
Enwere ike iji peppermint na-abụghị ụzọ omenala, na-eme ka ịsa ahụ na-esi ísì ụtọ ya. Iji mee nke a, ị ga-akwadebe efere ahụ na-esonụ: 50 g nke Mint wunye 8 lita mmiri na obụpde maka nkeji 15, mgbe nke a na-adọta broth ruo 30 nkeji ọzọ. Ntụziaka a ga-enyere aka n'ịlụ ọgụ megide scrofula, ihe mgbu na nkwonkwo ma ọ bụ na rickets, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịsa saa mint na maka ihe ịchọ mma (50 g nke sentimita na-agbaze n'ime lita 10). Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikarị infusion na ịta ihe a maka enemas.
Maka ihe omimi, nke a na-esonyere ya na akwa ocha, a na-etinye ihe nnunu nke nnunu elu ugwu na bath tinyere mkpiri.
Na-atụle uru bara uru nke peppermint, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịmara ihe ndị na-eme ka ọgwụ ọgwụ a dị. Nke mbụ, a na-agwa ndị mmadụ na-arịa ọbara mgbali elu. Nke a apụtaghị na ị ghaghị ịhapụ mmanya a kpamkpam, ọ dị gị mkpa iji nlezianya were ya.
A na-egbochi mint na ndị nne dị ime na ndị na-enye nwa ara, ọ bụ ezie na ọ na-egbochi nhụsianya. O kwere omume na mgbe ị jụsịrị dọkịta, ị ka nwere ike ịnweta tii na-esi ísì ụtọ mgbe ụfọdụ.
Otu ọzọ, nke bụ contraindicated peppermint, bụ allergies na onye enweghị ndidi na osisi a. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike izere nhụsianya na-adịghị mma site n'ịhapụ kpamkpam iji osisi a (na ụdị ọ bụla).
A na-emegidekwa osisi ahụ akọwapụtara maka ụmụ ọhụrụ, ebe menthol nọ na mint nwere ike ime ka ịda mbà n'obi ma ọ bụ ọbụna nkwụsị kpamkpam nke iku ume nwa ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị na-akwadebe ihe dị iche iche na decoctions nke peppermint, ọ dị mkpa iji hụ usoro ọgwụgwọ ọbụna maka ndị na-adabaghị na mpaghara ndị dị n'elu, ebe ọ bụ na nfe ya nwere ike ịkpata ụra. Nyocha nke onye nlekọta na-abịa, bụ onye, ​​mgbe nyochachara kwesịrị ekwesị, ga-enyere gị aka ịghọtakwu usoro ọgwụ mkparịta ụka ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ, agaghị adị oke.